याचु होटल विवाद : साझेदारले अन्याय गरेको ताम्राकारको दाबी | गृहपृष्ठ
Home समाचार याचु होटल विवाद : साझेदारले अन्याय गरेको ताम्राकारको दाबी
on: १९ असार २०७५, मंगलवार ०७:४८ समाचार
याचु होटल विवाद : साझेदारले अन्याय गरेको ताम्राकारको दाबी
काठमाडौं । भक्तपुरको कमलविनायकमा सञ्चालित याचु होटल विवादमा तानिएको छ । सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको यातु होटलका लगानीकर्ताहरूबीच समझदारी हुन नसक्दा यो होटल विवादमा तानिएको हो । याचु होटलका सञ्चालक उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद ताम्राकार हुन् ।
यसअघि ताम्राकारसँगै सरू महत र मणिविक्रम शाहबीच भक्तपुरकै सबैभन्दा ठूलो बुटिक होटल (यातु) सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । ताम्राकारको ५२ प्रतिशत, सरू महत र मणिविक्रम शाहको २४÷२४ प्रतिशत शेयर लगानीमा होटल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, लामो समयसम्म महत र शाहले होटल सञ्चालनमा ढिलाइ गरेपछि ताम्राकारले याचु होटल सञ्चालन गरेका थिए ।
पहिले होटल सञ्चालन गर्ने भनिएको भवनमा ताम्राकारले याचु होटल स्थापना गरेपछि विवाद चुलिएको हो । ताम्राकारको आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण गरेको हुनाले उनीहरूबीच २० वर्षको लागि मासिक ४ लाख भाडा तिर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । सम्झौतापश्चात् महत र शाहले निश्चित रकम दिएर बेपत्ता भएपछि ताम्राकारले सोही भवनमा याचु होटल सञ्चालन गरेको दाबी गरेका छन्, जसले गर्दा याचु होटल विवादमा परेको हो । यस्तै, यातु होटल सञ्चालन गर्ने योजना पनि अन्योलमा परेको छ ।
यही विषयलाई लिएर केही महीना अगाडि महत र शाहले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा ताम्राकारको विरुद्धमा उजुरी पनि गरेका थिए । सञ्चालक कृष्णप्रसाद ताम्राकारले लगानीकर्ताको यस कदमले आफूलाई ठूलो अन्याय भएको बताए । उनले भने, ‘मैले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भएन । सम्झौताअनुसार पैसा पनि नपाएपछि मैले बाध्य भएर याचु होटल सञ्चालन गरेको हुँ ।’ आफूलाई फसाउने खेल भइरहेको बताउँदै उनले कानूनी बाटोमार्फत आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने बताए ।
ताम्राकार, महत र शाहबीचको सहमतिअनुसार ताम्राकारलाई अध्यक्ष बनाएर कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । सोही आधारमा आ–आफ्नो शेयर लिने र कबुलअनुसारको रकम कम्पनीमा जम्मा गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो । २०७३ फागुन १५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारमा होटल दर्ता गर्दा कम्पनीको पूँँजी रू. २ करोड देखाइएको छ । सहमतिअनुसार महत र शाहले रू. ९६ लाख रकम कम्पनीमा बुझाउनुपर्थ्यो । तर, उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट रू. १० लाख मात्र दिएर होटल नै कब्जा गर्न खोजेको ताम्राकारको भनाइ छ ।
ताम्राकार आफू एक्लैले होटल सञ्चालन गर्ने भनी ६ वर्ष लगाएर भवन निर्माण गरेका थिए । तर, भूकम्पपछि पर्यटक नआउने डरले सञ्चालन हुन सकेको थिएन । त्यही बेला सरू महत र होटल डे कोर्टियार्ड हिस्सेदार बनेका थिए । होटल डे कोर्टियार्डमा मणिविक्रम शाहको लगानी रहेको बताइएको छ ।
सञ्चालक शाहले पछिल्लो समय शाह र महतले अनावश्यक दुःख दिँदै शेयरभन्दा बढी रकम माग गर्न थालेको ताम्राकारले बताए । शेयरको विवादलाई छलफलबाट मिलाउन सकिने ठाउँमा प्रहरी लगाएर आफूलाई मानसिक तनाव दिइरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, महत र शाहले पनि ताम्राकारकै कारण आफूहरूलाई समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । ताम्राकारले सम्झौताअनुसार काम गर्न नचाहेको उनीहरूको भनाइ छ ।